Umbala wangokwezifiso wemibala yemvula, elungele i-EMS, umhlengikazi, umuthi, amaphoyisa nesicishamlilo
Isikena se-Bandage Scears, isikere se-bandage esingenasici, ukuthengisa okuthengiswayo
I-Trauma Shears Shears Scissars Scissors Arncring Scessers nge-Non-Blades blades insimbi engagqwali yezokwelapha i-Scissors Scissors |
I-China Professional Proative titanium ikhwalithi yekhwalithi ye-premium- HOICTE HOIT FORT TO SUUntuR
I-Bandage Scissors Scissors Scissors Abahlengikazi Isikere Esiphuthumayo Scissors Umbala Wensimbi Engagqwali
Ukwakhiwa Kwezinto Ezisindayo: I-EMT Shears ye-EMT icima ama-blades ensimbi aphezulu anezinsimbi ezinemiphetho ebukhali emile kanye nama-serrs agaywe ngokusika izinto ezinzima kakhulu ngaphezulu nangaphezulu. Kuhle izimo eziphuthumayo zezokwelapha noma yisiphi isimo lapho kudingeka khona amandla amakhulu okusika.
I-Super Sharp: Lezi zikhafu zezokwelapha zibukhali futhi ziqinile ekususweni okusheshayo kwezingubo ezivela ezigulini, zokugqoka, nezinye izinto ezivinjelwe. Ama-blade awagcini kuphela nge-3x enzima kunensimbi engenasici, kepha futhi amabala anendawo engeyona induku ephikisana nokunamathela kwetheyipu, ukuncipha okuphansi kokuncipha kwezinto ezinzima kakhulu. Sinquma ngokungafanele ngezinto ezifana namabhandeshi, okokugqoka, i-vinyl, isikhumba, izingqimba eziningi zezindwangu eziwugqinsi noma ngisho nepeni!
Ukusebenza Kwekhwalithi ye-Premium: Ukubamba okuthambile, izibambo ezingezona ezishubile ezinokuvuleka kweminwe okukhulu kwenzelwe ukumelana nokwelashwa okunzima kanye namazinga okushisa azenzakalelayo kuya ku-290 f / 143 C. The Bandage Shears Unethezekile ukubamba futhi kulula ukusebenza kuzo zombili isandla kwesokudla nakwesobunxele. Idizayinelwe ngethiphu ephephile ephephile ukuze ususe ama-bandages kanye nokugqoka ngaphandle kokulimaza isiguli ngethiphu evikelwe ebanzi.